खानेकुरा होइन, ओतलाग्न त्रिपाल पनि छैन
[2015-04-29 오전 10:11:00]
भुकम्प गएको चौंथो दिन भयो। पूरै गाविस त्रासमा छ। गाविसमा करिब १ हजार ५ सय घरधुरी रहेकामा सग्ला घर एकाध मात्र छन्। सबैजसो घरहरु क्षतविक्षत छन्। चर्को घाम लाग्दा र पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ छैन। बुढापाका र बालबालिका रोइरहेका छन्।
शनिबार मध्यान्हपछि खाना खान नपाएको भोको पेट, त्यसमा निरन्तरको भुकम्पको झट्काले बालबालिका र बुढापाका सम्हालिउन् कसरी? गाउँका युवाहरु सबैजसो विदेशमा छन्। गाईभैंसी र बाख्रा गोठमै पुरिएका छन्। पुरिएको सिनो झिक्ने जनशक्ति गाउँमा छैन।बुढापाका र महिलाहरुसँग त्यो साहस छैन। सिनोले महामारीको रूप लिएला भन्ने त्रास व्याप्त छ। यो कारुणिक अवस्था हो काभ्रेको गैरीविसौना देउपुर गाविसको।
सीमा जोडिएका बालुवापाटी देउपुर र नयाँगाउँ देउपुरको अवस्था पनि उस्तै छ। भुकम्पले पूरै गाविस क्षतिग्रस्त हुँदा पनि यी तीन गाविसवासीले मुलुकमा सरकार छ भन्ने महशुश गर्न पाएका छैनन्। गरुन् पनि किन? तीन दिनदेखि खुला आकाशमुनी भोकभोकै बस्नु परिरहेको छ।राज्यले पानीबाट जोगिनका लागि ओत लाग्न एउटा त्रिपालसम्म दिएको छैन। खानेकुरा त टाढाको कुरा। कतिपय टोलवासीले प्लाष्टिकको जोहो गरेर ओत लाग्ने ठाउँको व्यवस्था गरेपनि धेरैजसोले पालको अभावमा आइतबार बेलुका पानीमा भिज्नुपर्‍यो। त्रिपालसम्म नपाएको अवस्थामा हामीले मुलुकमा सरकार छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु? बालुवापाटी देउपुर ४ का स्थानीय विष्णुबहादुर तामाङ प्रश्न गर्छन्। विष्णुबहादुरसँग चार छोराछोरी, श्रीमती र वृद्ध आमाबाबुलाई खुवाउने एक गेडो अन्न छैन।
धन्न भुकम्प गएका बेला छोराछोरी घर नजिकैको चौरमा खेल्न गएका थिए र बचे। चारै छोराछोरी पुरिएको आशंकामा दिनभर रोएका विष्णुबहादुरको अनुहारसाँझपख छोराछोरी घर फर्किएपछि मात्र उज्यालिएको थियो। छोराछोरी सामुन्ने पाएपछि उज्यालिएका विष्णुबहादुर उनीहरुलाई खाना खुवाउन नसक्दा र ओत लाग्ने स्थानमा राख्न नसक्दा निकै चिन्तित छन्। विष्णुबहादुरको छिमेकमा एक दर्जनभन्दा बढी घर रहेकामा सबै भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। घरगोठ भत्किएर भैंसी पुरिएपछि परिवार पाल्ने बाटो बन्द भएको छ।
उनले दुध बेचेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका थिए। परिवार कसरी पाल्ने र घर कसरी ठड्याउने? यो प्रश्नले निकै घोच्न थालेको छ विष्णुबहादुर र उनका छिमेकीलाई।
चार दिनको बीचमा भुकम्प पीडित स्थानीयवासीलाई सान्त्वना दिन राज्यको कुनै संयन्त्र पुगेको छैन। निर्वाचनका बेला नमस्कार गर्दै दैला दैला चहारेका नेताहरुलाई पनि उनीहरुले देख्न पाएका छैनन्।
भुकम्प प्रभावितहरु आफ्ना लाखौं मूल्यका क्षतिग्रस्त घर हरेर यतिखेर आफूलाई प्रकृतिबाट मात्र होइन, सबैतिरबाट ठगिएको महशुश गरिरहेका छन्।
गैरीविसौना देउपुर गाविसको वडा नम्बर ७ मा सल्लेवास भन्ने गाउँ छ। उक्त गाउँमा सबै घर ढलेका छन्। गाउँका दृष्य देख्दा आँखा रसाउने अवस्था छ। पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त घर र खुल्ला आकाशमुनी बालबालिका र बुढापाका रोइरहेको दृष्यले आँसु थाम्न सक्ने कुरै भएन।
कृषि सल्लेवासवासीको मुख्य पेशा हो। तर धान, मकै, कोदो सबै भुकम्पले खाइदिएको छ। कुनै स्थानीयवासीसँग पनि एक गेडो अन्न छैन। घरभित्रको अन्न कसैले पनि निकाल्न पाएन। सबै घरभित्र ढुंगामाटोमा मिसिएको छ। स्थानीयवासीले बालबाल ज्यान जोगाए। भुकम्प आएको समयमा पहिलो तलामा सुतिरहेका फणिन्द्रप्रसाद तिमल्सिना भाग्यले बचे। भुकम्प जानासाथ भागेर वाहिर निस्कन सम्भव नदेखेपछि उनी थाम समाएर वसे। भुकम्प रोकिएपछि कहालिंदै घर वाहिर निस्के। उनी निस्केको केही बेरपछि फेरि गएको अर्को झट्काले घर गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। शनिबार अपरान्हको घटना सम्झंदा निकै झस्किन्छन् उनी। भुकम्पले उनका दुई वटा घर र एउटा गोठ पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। वर्षौं मिहेनत गरेर ठड्याएका १५ लाख भन्दा बढी मूल्यका घर क्षणभरमै ढलेको परिणाम फणिन्द्रप्रसाद प्रतिक्रियाविहिन छन्।
उनी अहिले भोको पेटमा खुला आकाशमुनी बसेर भग्नावशेषमा परिणत भएका घर नियाल्न वाध्य छन्। भत्किएका घरका ढुंगामाटो कसरी पन्छाउने? घर कसरी बनाउने? घर नबनेसम्म कहाँ बस्ने? खेतबारीमा लगाएको अन्न कहाँ भित्र्याउने? अनेक प्रश्न अनुत्तरित भएकाले उनको अनुहार निकै मलिन छ।
यस्ता अनेक प्रश्न मनमा खेलाएर मलिन हुने फणिन्द्रप्रसाद एक्ला होइनन्। गैरीविसौना देउपुर, बालुवापाटी देउपुर र नयाँगाउँ देउपुरका भुकम्प पीडित सबैको अवस्था एउटै छ। यी तीन गाविसमा ४० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। भत्किएका घर कोट्याउँदा मृतकको संख्या अझै बढ्ने स्थानीय निलकण्ठ तिमल्सिना बताउँछन्। कति मानिस पुरिए भन्ने यकिन नभएको यी तीन गाविसमा पुरिएका गाईभैंसी र बाख्राको गणना नै छैन।
तर पुरिएका मानिसको लास र गाईभैंसीको सिनो निकाल्न गैरीविसौना देउपुर, नयाँगाउँ देउपुर र बालुवापाटी देउपुर गाविसमा सरकारको उपस्थिति छैन। यी गाविसमा अहिलेसम्म उद्दार टोली पुगेको छैन। तीनवटै गाविस शोकमग्न छन्। तिनै गाविसको दृष्य जोकोहीलाई रुवाउने खालको छ।